ဂျိုးအမ​တေဥ (အမြု​တေ )ရှာပုံ​တော်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂျိုးအမ​တေဥ (အမြု​တေ )ရှာပုံ​တော်​
ဂျိုးအမ​တေဥ (အမြု​တေ )ရှာပုံ​တော်​
Posted by မောင်ရိုး on Dec 27, 2013 in Creative Writing | 18 comments
****** ဂျိုးအမြုတေဥ ရှာပုံတော် *****
လွန်ခဲ့သောအနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော်ခန့်ကဖြစ်သည်။တိတိ ကျကျပြောရလျှင် ….
1992 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလဆန်း ….ကျနော်နှင့် သူငယ်ချင်းမျိုးတင့် ၊ မျိုးတင့်၏တပည့်ကျော်မျောက်ရှုံး ၊ လမ်းပြကြီး စောအယ်ထူးတို့သည် ပဲခူးရိုးမတောကြီးအတွင်းသို့ ဝင်ခဲ့ကြဖူးလေသည် ။!
ကျနော်တို့သည် တွတ်ပီမဟုတ်ပါ ။ အလန်ကွာတာမိန်းလည်းမဟုတ်ပါ ။ ဗိုလ်တာရာ လည်းမဟုတ်ပါ…. ထို့အတူ စနေမောင်မောင်လည်းမဟုတ်ပါ ။ သို့သော် …. ဂျိုးမတေဥ (ဂျိုးအမြုတေဥ) တစ်လုံးအတွက် အသက်ဘေးနီးကပ်စွာစွန့်စားလျက် အခက်အခဲများစွာကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြဖူးလေသည် ။
ဒီသတင်းကို သယ်လာသူကမျိုးတင့််ဦးလေးဖြစ်သူ၏မိတ်ဆွေ နယ်လှည့် ပရဆေးအရောင်းသမား ဦးသာနုဖြစ်သည် ။ သူငယ်စဉ်က ရှားပါးပရဆေးမြစ်များကိုရှာဖွေရင်းဂျိုးမတေ ဥတစ်လုံးရဖူးလေသည် ။ ရောင်းရငွေမှာ ထိုစဉ်က မော်တော်ကားတစ်စီး တန်ဘိုးမျှ ရသည်ဟုဆိုသဖြင့် ကျနော်တို့ လူငယ်များ သရေကျရလေတော့သည် ။
ကျနော်တို့လည်း ဦးသာနုထံမှ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နေရာဒေသတို့ကို သေချာစွာမှတ်သား၍ ပဲခူးရိုးမတောကြီးတွင်းသို့ ဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြ​လေ​တော့သည်​ ။
ဦးစွာပထမ ​တောတွင်း၌လိုအပ်​မည်​ထင်​​သောပစ္စည်းများကိုစု​ဆောင်းခြင်း ၊
လူတိုင်းနီးပါးက ကျ​နော်​တို့အားတားကြပါသည်​ ။ သို့​သော်​ ​လောဘစိတ်​၏​စေစားရာဖြစ်​​သော ဆန္ဒ ပြင်းပြလှ​သော​ကြောင့်​
ကျ​နော်​တို့မှာ​ခေါင်းမာစွာပင်​ ​တောထဲဝင်​ရန်​ဆုံးဖြတ်​ခဲ့ကြပါသည်​ ။
ပါပါကြီး ။ ။
ထိုသူမှာ ချင်းလူမျိုး ဘီအိုင်​​အေ​ခေတ်​ စစ်​သား​ဟောင်းကြီးဖြစ်​၍
၈၈ အ​ရေးအခင်းမတိုင်​မှီအထိ ​အ​ပျော်​တမ်းမုဆိုး​ဟောင်းကြီးဖြစ်​သည်​။
​ပဲခူးရိုးမတခွင်​ ပြဲပြဲစင်​​အောင်​ပတ်​ခဲ့ဖူးသူ​ပေတည်း ။
ကျ​နော်​တို့နှင့်​ရင်းနှီးသူဖြစ်​၍ မကြာခဏမုဆိုးပုံပြင်​များ​ပြောပြတတ်​သူ ။
သူ့ထံမှ ကျားရိုး၊ဆတ်​ခွါနှင့်​ အခြား​ဆေးဖက်​ပစ္စည်းများ မကြာမကြာ​ပေးတတ်​သူ။
ထိုသို့​သောမုဆိုး​ကျော်​ကြီးထံ ကျ​နော်​တို့ပွင့်​လင်းစွာတိုင်​ပင်​ခဲ့​လေသည်​ ။
သူ့အဆက်​သွယ်​ဖြင့်​ ဦး​စောအယ်​ထူးဟု​ခေါ်​သော လမ်းပြကြီးကို စည်းရုံးနိုင်​ခဲ့ပါ၏ ။
ကိုညိုလှ ။ ။ စစ်​သားလူထွက်​ လက်​ရှိမုဆိုးလုပ်​​နေသူ ။
ပဲခူးရိုးမထဲတွင်​ တစ်​​ယောက်​တည်း ​တောလည်​တတ်​သူ ။
​ထိုသူကို ကျ​နော်​တို့ အဖွဲ့​ခေါင်း​ဆောင်​အဖြစ်​စည်းရုံးနိုင်​ခဲ့ပါသည်​ ။
​မျောက်​ရှုံး ။ ။ သူငယ်​ချင်းမျိုးတင့်​တို့မိသားစု၏တပည့်​​ကျော်​။
သရဲအလွန်​​ကြောက်​တတ်​ပြီး ၊ သစ်​ပင်​တက်​အထူးကျွမ်းကျင်​သူ ။
​တောစပ်​သို့မကြာမကြာသွားဖူးပြီး သစ်​ခုတ်​ဝါးခုတ်​ လုပ်​သူ ။
ဦးကုလားကြီး ။ ။
ယခင်​က ချင်းမုဆိုးပါပါကြီးနှင့်​ ​တောလည်​လိုက်​ဖူးသူ ။
အထက်​ပါ လူကြီးများထံမှ​မေးမြန်းနည်းနာခံပြီးလျှင်​ ကျ​နော်​တို့ အဖွဲ့​လေး​တောထဲဝင်​ခဲ့ကြသည်​ ။
တကယ်​သွားမည့်​​နေ့မတိုင်​မှီ ၂ ရက်​ခန့်​အလိုတွင်​ ​ခေါင်း​ဆောင်​ကိုညိုလှအား ငှက်​ဖျား​ရောဂါမသက်​သာသဖြင့်​
​ဆေးရုံတင်​လိုက်​ရသည်​ ။ ကျ​နော်​တို့ ခရီးစဉ်​ပျက်​မလိုဖြစ်​ခဲ့​သော်​လည်း ​ခေါင်းမာလှ​သောမျိုးတင့်​မှာ ဦး​စောအယ်​ထူးကို ​ခေါင်း​ဆောင်​တင်​ပြီး
သို့နှင့်​ …. ကျ​နော်​ ၊ မျိုးတင့်​ ၊​မျောက်​ရှုံး နှင့်​​စောအယ်​ထူးတို့​လေး​ယောက်​တို့သည်​
အိမ်​​ခြေ ၂၀ ခန့်​သာရှိပြီးရွာနာမည်​ပင်​မရှိပါ။ ကျ​နော်​တို့ သူ့ထံအရင်​သွားကြသည်​ ။ သူ့အိမ်​တွင်​တစ်​ညတာတည်းခိုပြီး​နောက်​​နေ့နံနက်​​စော​စောတွင်​မှ
သူ့ထံ​ရောက်​​သောအခါ ည​နေ​ ၄နာရီခွဲခန့်​ဖြစ်​​သောလည်း
​တောရိပ်​​တောင်​ရိပ်​ဖြင့်​ အ​အေးဓတ်​ကစတင်​မိတ်​ဆက်​လာ​လေပြီ ။
ခဏနားပြီး ကျ​နော်​တို့သုံး​ယောက်​သား မျက်​နှာသစ်​ ၊ကိုယ်​လက်​သန့်​ကြသည်​ ။
အမိုး (​စောအယ်​ထူး၏ဇနီး) က မိုးမချုပ်​မှီထမင်းပြင်​​ကြွေးပါသည်​။
ကနဦး​တော့ … ​တောကြိုအုံကြားတွင်​ဖြစ်​သလိုချက်​​သောဟင်း​တွေဟု အထင်​​သေးမိသည်​ကိုဝန်​ခံပါ၏ ။သို့​သော်​ …
အမှန်​တကယ်​စား​သောအခါတွင်​မူ ဗိုက်​တလုံးပင်​အပို​ဆောင်​ထားချင်​မိ​လေ​တော့သည်​ ။
​တောစာ ၊ ​တောဟင်း​လေးများနှင့်​ ရိုးရာဟင်း
တို့မှာ လျှာဂျွန်း​ပြန်​​အောင်​​ကောင်းလှ​ပေသည်​ ။
ကြက်​​ရေချိုအစပ်​ချက်​ ၊ ပဒတ်​(ပုတက်​)​ထောင်းစပ်​စပ်​​လေး၊ ကရင်​တာလ​ဘောဟင်းချို ၊ ပဲ​ဇောင်းလျားသီးပြုတ်​၊
ထမင်းစားပြီး​တော့ … ည​နေ ၆ နာရီခန့်​ ..
​မှောင်​ရိပ်​သန်း၍ ခတ်​စိမ့်​စိမ့်​​လေးဖြစ်​လာ​လေပြီ ။
တဲ​ရှေ့ကွတ်​ပစ်​တွင်​ထိုင်​ရင်း ​နောက်​​နေ့အတွက်​ တိုင်​ပင်​ကြ​လေသည်​ ။ ဦးသာနုမှာ ကရင်​ကြီးဦး​စောအယ်​ထူးကိုတဖွဖွမှာ​လေသည်​ ။
သူက​တော့ မနက်​လင်းလျှင်​မြို့ကိုပြန်​မည်​ဖြစ်​သည်​ ။
ကျ​နော်​တို့သုံး​ယောက်​မှာ ​အမိုးတည်​ခင်း​သော ​ရေ​နွေးကြမ်းခါးခါးနှင့်​
အ​ပျော်​ကြီး​ပျော်​​နေမိ​လေ​တော့သည်​ ။ တခါမှမ​ရောက်​ဖူး​သော
ခဏကြာ​သော်​ …ဦး​စောအယ်​ထူးမှ ကျ​နော်​တို့ကိုလက်​ချာရိုက်​​လေ​တော့သည်​ ။
​တောထဲ​ရောက်​လျှင်​ ဟိုဟာမလုပ်​ရ ၊ဒီဟာမလုပ်​ရ ၊
စသည်​ဖြင့်​ ​တောတွင်းပညက်​​တော်​ ၁၆ ပါး ။
​တောတွင်​​ရောက်​ပါမှ မှန်​လိုက်​သည့်​ဖြစ်​ခြင်းဟု ။
ဝါးလုံးများစီခင်းထား​သောကြမ်းပြင်​တွင်​အိပ်​ရသည်​မှာ ခိုးလိုးခုလုဖြင့်​ရုတ်​တရက်​အိပ်​မ​ပျော်​ ။
မည်​သည့်​အချိန်​ကအိပ်​​ပျော်​သည်​​တော့မသိ… ဖထီး (​စောအယ်​ထူး) လာနှုိး​သောအခါ နံနက်​ ၅နာရီခွဲ….။
ကမန်းကတန်းထပြီးမျက်​နှာသစ်​၍ အထုပ်​ပြင်​ကြသည်​ ။ ထိုစဉ်​မှာပင်​ … ထမင်းပူပူ​လေးနှင့်​ ငါးခြောက်​ဖုတ် ၊ ပဒတ်​​ထောင်းနှင့်​
နံပါတ်​ ၂ ကျည်​ထည့်​ပစ်​ရ​သော ​လေ​သေနတ်​တစ်​လက်​ ပါလာခဲ့သည်​ ။ ပဲခူးရိုးမတွင်​ ကျားမျိုးတုန်းသွားပြီဖြစ်​၍ စိုးရိမ်​မှုမရှိသည်​လည်းဖြစ်​​လေ၏ ။
သို့​သော်​ … အခြား အန္တရယ်ပြုနိုင်​​သော​တော​ကောင်​များ
ရှိသည်​ကို​တော့ မ​တွေးမိ​သေး​ပေ ။ ဖထီး မှာ ကျ​နော်​တို့​သေနတ်​ကိုကြည့်​ပြီး
ရယ်​​မော​လေသည်​ ။ ထို့​နောက်​ ..သူ့လက်​စွဲ​ကျော်​ဒူး​လေးကြီးကို
ကျ​နော်​တို့က သူ့ဒူး​လေးကိုကြိတ်​ပြီး​လှောင်​​နေမိပြန်​သည်​ ။
နိုင်​တီးဂွမ်​တီး​ကျောက်​​ခေတ်​ကလက်​နက်​ဟု မကြား​အောင်​​ပြောမိကြသည်​ ၊။
​တွေးခဲ့သည်​ ။တဖြည်းဖြည်း ၃ ​ပေခန့်​ရှိလူသွားလမ်းမှာ ကျဉ်းမှန်းမသိ ကျဉ်း၍လာ၏ ။ ​ကျောပိူးအိပ်​ထဲတွင်​ရှိ​သော ဆန်​တပြည်​နှင့်​ ​စောင်​အပါအဝင်​
တကိုယ်​​ရေသုံးပစ္စည်းများမှာလည်း ​လေးလံစပြုပြီဟုထင်​မိသည်​ ။
လျှို​မြှောင်​များ ကိုပတ်​ပြီးတက်​​နေရသဖြင့်​ ခရီးမတွင်​လှ​ပေ ။
ညအိပ်​စခန်းမှာ ယခင်​ကသစ်​​ခိုးထုတ်​​သောစခန်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်​​ပေသည်​ ။
ထို​နေရာတွင်​ စခန်းချ​နေထိုင်​လျှက်​ သင်းသတ်​ပြီးသားနိုင်​ငံ​တော်​ပိုင်​သစ်​များကိုခိုးထုတ်​ခြင်း၊
စ​သော ​မှောင်​ခိုလုပ်​ငန်းတို့အ​ခြေချရာဖြစ်​​သည်​ ။
ကျ​နော်​တို့လမ်းပြ​ခေါင်း​ဆောင်​ကြီး ဖထီး​စောအယ်​ထူးမှာ ထိုစခန်းရှိသစ်​များကို သူ့ကျွဲနှစ်​​ကောင်​ဖြင့်​မကြာခဏဆွဲ​ပေးဖူးသည်​ဖြစ်​၍
ထိုစခန်းသို့ တ​ထောက်​နားရန်​သွားကြခြင်းဖြစ်​​လေသည်​ ။
ထိုမှတဆင့်​ ​တောထူထပ်​ရာသို့ဝင်​ပြီး ချိုးသိုက်​များရှာကြမည်​ဖြစ်​​လေသည်​ ။
ကျ​နော်​တို့လည်း ​နေ့လည်​ပိုင်းတွင်​ အမိုးထည့်​​ပေးလိုက်​​သောထမင်းထုတ်​ကို
ခဏနားရင်းစားကြ​လေသည်​ ။ ဤတွင်​ … ​တောဓ​လေ့ကိုစပြီးသိရသည်​ ။
ကျ​နော်​တို့အားဖထီးမှ မစားခင်​လမိုင်းနတ်​အား စားဦးစားဖျားတင်​ခိုင်း​လေ​တော့သည်​ ။
စိတ်​ထဲတွင်​ သိပ်​မနှစ်​မျို့လှ​သော်​လည်း သူ့အရပ်​သူ့ဇတ်​မို့ ထမင်းတစ်​ဆုပ်​ဟင်းတစ်​လုပ်​​တော့ ဖက်​ထဲထည့်​ပြီး
တင်​​မြှောက်​ခဲ့ရသည်​ ။ ပသီ ​မောင်​နှမဆိုလား… သူတို့အပိုင်​နယ်​ဟု ။
ကျနော်​တို့အဖွဲ့သည်​ ညအိပ်​စခန်းသို့ ည​နေ​စောင်းတွင်​​ရောက်​ရှိခဲ့၏ ။
စခန်းဆို​သော်​လည်း ယာယီအမိုးအကာတဲသုံးလုံးမျှသာ …။
မူလက တစ်​ပုဒ်​တည်းပြီးတင်​လို​သော်​လည်း တကယ်​​ရေးပြီး​သောအခါ စာလုံး​ရေ ​ထောင်​​ကျော်​သွား၍လည်း​ကောင်း ​မောင်​အံစာ​ရေးသာပြီး​သောအပိုင်းကိုပြန်​လည်​​ဖော်​ပြရမည်​ဖြစ်​​သော​ကြောင့်​လည်း​ကောင်း အခန်းဆက်​ခွဲရခြင်းအ​ပေါ်
တွတ်ပီမဟုတ်ပါ ။ အလန်ကွာတာမိန်းလည်းမဟုတ်ပါ ။ ဗိုလ်တာရာ လည်းမဟုတ်ပါ…. ထို့အတူ စနေမောင်မောင်လည်းမဟုတ်ပါ ။
ဂျလေဘီ အိပ်စပို့ အင်ပို့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီး ၏ ဂျိုးအမတေ ရှာပုံတော်ကို ဆက်လက် စောင့်ဆိုင်းနေပါမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဂျိုးအမြုတေဥဆိုပြီး ကြက်ဥလိုပုံစံနဲ့ ရွံ့လုံးလေး တွေ့ဖူးတယ်။
လေသေနတ်စမ်းချင်တဲ့သူက သေနတ်ပြောင်းဝနဲ့ချိန်ပြီးပစ်ထည့်လိုက်တာ အမှုန့်ဖြစ်သွားတာပဲ။
စနေမောင်မောင်တို့ တွတ်ပီတို့ကို ထက် ပို စိတ်ဝင်စားမိပါသည်။
နောက်အပိုင်းကို မြန်မြန်တင်ပါရန် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
ဟိုစဉ်က ဒဂုန်ရွှေမျှား / မင်းသိင်္ခ နှင့် ကြိစက္ကတို့၏စာအုပ်များကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ဖတ်ခဲ့ဖူးသော နေ့ရက်များကိုလည်း ပြန်သတိရသွားပါသည်။
လူဆိုး စာလုံးရေ များရင်လဲ နှစ်ပုဒ် ခွဲတင်ပါလား
ဖတ်တဲ့သူကို ဆန့်တငင်ငင် ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်
ဘာလုပ်လုပ် တန်းလန်းကြီး ဖြစ်နေပါစေ ဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်နော်
ငယ်ငယ်ကတော့ အဲလို မတေဥ တွေ့လိုဆိုပြီး ဟုတ် မဟုတ် သေနတ်နဲ့ ပစ်စမ်းတဲ့ နောက် ကလေး ပီပီ လိုက်ကြည့်ဖူးရဲ့
ခုလို ခဏ စောင့်ခိုင်းဒါ
ခညားလည်း ပြန်ပြီး ဝဋ်လည်လိမ့်မယ်နော် ….
စောင့်ဖတ်ဖို့ စောင့်နေဘာဒယ်ဗျို့ …
ခုတော့.. တောနင်းပြီး.. သွားလိုက်တိုင်း.. ဟိုဟာမကိုင်ရ.. ဒီအကောင်မထိရ.. ဟိုးအကောင်မပစ်ရ.. ဟိုသစ်ကိုင်းမချိုးရ… ချည်းဖြစ်နေလို့…
၀က်ဝံနဲ့တွေ့ရင်တောင်.. သူ့အသက်ကသိပ်တန်ဖိုးရှိနေသမို့.. ကိုယ်ကအသေခံပေးရမယ့်ပုံ….
တနေ့ကတင်… တောထဲခြံဝယ်ထားတဲ့.. ဗမာတယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်သေး..
တနှစ်မှ တရာသီ(တလလောက်မှာ) အစောင်၃ထောင်ရောင်းတာ..နောက်နည်းနည်းကျတာနဲ့..ကုန်သတဲ့..
လိုင်စင်ပေးတဲ့ရာသီမှာ… သမင်တွေက.. ဘယ်သူသိမ်းထားလိုက်မှန်းမသိ.. (ကျုပ်ကတော့..အစိုးရဖမ်းသိမ်းထားတယ်ထင်တာပဲ) တကောင်မှမတွေ့ရဖူးတဲ့..
ဒီမှာက သစ်​​တောဥပ​ဒေအရ လုံးဝ မထိရမယ့်​အ​ကောင်​​တွေ
ရှိ​ပေမယ့်​ .. ​တချို့​ကောင်​​တွေက​တော့ ပစ်​လို့ရပါ​သေးဗျာ ။
စိတ်​ဝင်​စား​သေးရင်​ ​တောစပ်​ (နှစ်​ ညအိပ်​ခရီး) ကို​လောက်​တော့ ပို့ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီမှာ အခုချိန်သေနတ်လိုင်စင် မပေးတော့
တရားမဝင် တောထဲမှာပစ်ရမှာလေ …
တောအကြောင်းပြောရရင် ကိုယ်တွေ့မို့ ယုံပါ၏…
တောခြောက် တောမှောက် မမြင်ရတာတွေလည်း အများကြီး…
မုဆိုးကျော်ကဆာမိရဲ့ မဟာစွန့်စားခန်းကြီးကို စောင့်မျှော်လျက်ပါ…
တောတွင်း အခန်းဆက် တွေ အင်တာနက်မှာ ဖတ်ဖူးတား ပထမဆုံး အကြိမ်ပဲဂျို့
ဂျိုးအမြူတေလားတော့သိဘူး အံစာတုံးမှာတော့ရှိတယ်ကြားဘူးတယ်..
မြန်မြန်လေးဆက်ရေးပါ..တော်အကြောင်း တောင်အကြောင်းဆို စိတ်ဝင်စားတယ်။
ရှင် ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဒီမှာ စွန့်စားခန်းကြီးကို ဖတ်လို့ကောင်းတုံးရှိသေးတယ်
ဗိုလ် တာ ရာ ဖိုး ကျော့ နဲ့ မုဆိုး ကြိး စိန် ၀င်း တို့ စာတွေ ကို ပြန်သ တိ ရ သွား သည် ကဆာမိ
အမှတ်​တရ အား​ပေးချီးမြှင့်​ မှတ်​ချက်​​ရေး​ပေးကြကုန်​​သော
အစ်​ကိုကြီး ကို​ပေါက်​ တို့အား
ဆက်​လက်​ပြီး မကြာမ​နှေး ကြိူးစားပြီး အပြီးသပ်​ တင်​​ပေးပါမည်​ဆိုသည့်​အ​ကြောင်း….